Vashandisi veLinux vanofanirwa kuchinja | Linux Vakapindwa muropa
This weekend zvinhu zvakaitika kwatiri zvatisati tambobata nazvo, pamwe mune ramangwana tichaburitsa pachena zvese zvakaitika, asi chandiri kunyatsoda kutaura ndechekuti sei Staff by LXA! uye semushandisi weLinux (masosi, anonyora izvi) tafunga nezvezvinhu zvakawanda.
Haisi nguva yekutanga kubata nyaya iyi, saka ngationgororei kuti tinonzwisisa sei izvi pano:
Yakadaidzwa Kune godo here kuUbuntu? uye yaive chinyorwa chedu chekutanga mu Menéame kavha (Isu hatitakure dzakawanda futi, chete 2 uye akati wandei angangoita xD). Tinorangarira kuti tese takasvika pakufunga kuti, kunyangwe vamwe vangazvidemba, shanje dziripo, pasina kufungira chokwadi chekuti Ubuntu Haisi iyo yakanyanya kunaka distro mukuita (muchokwadi ini ndinoshandisa Debian nhasi), nekuti vakawana budiriro isingatarisirwe nemunhu: Kuwedzera iyo Linux Universe kuMasses.
Mune mamwe madenderedzwa godo iri rakashanduka rikava kurambwa kunoshanda, ndiko kuti, kwete chete ini ndinotsamwa pandinonzwa nezveUbuntu, asi ini ndinokurudzira kuti vanhu varege kuishandisa, kune chero pembedzo (huya, sekunge waive mushonga usiri pamutemo uye ivo Hurumende).
Takapedza kuburikidza negakava kuti izvi zviripo (uye inyaya yatobatwa asi inowirirana) nekuda kwechimiro chevashandisi ve-pre-Ubuntu Linux, vese vashandisi vemberi, vanongokumbira rubatsiro kana iyo yekudzidzira curve yakanyanya kuomarara kana kutevera data iro munhu anogovera.
Pakasvika huteri, mazhinji acho asina ruzivo vanhu uye, dzimwe nguva, aine zero hukama hwepakutanga neiyo terminal, radical linuxeros vanonhuwa, asi vakayamwa zvakanyanya kubva pachokwadi chekuti paive neakawanda kana kuti iwo akatarisa uye vakanga vakasiyana navo.
Vazhinji vakayamwa kubva mukuwedzeredzwa kweruzivo nezveUbuntu, vamwe vakayamwa kubva ku distro (chimwe chinhu chakajairika mune ese ma distros) asi chinhu chinosiririsa ndechekuti mamwe ma linuxers akapikisana nevashandisi.
Avo, avo generalize, achiti "hunteros ari ******* » vakave vanonyanyisa, vachifunga kuti vashandisi vevamwe vasara vema distros vanofanirwa kunge vakaita saivo, kumbira rubatsiro chete muzvinhu zvakaoma, tamba nemirairo, pedza zuva rese nePC, kuisa uye kubvisa ma distros sezvakabvumiranwa, zvinhu zvandinoita nekuti ini ndine nguva uye ndinovada, asi havafanirwe kuve chikamu chevashandisi vese, iyo PC uye iyo distro zvishandiso zvehunters uye kune vazhinji vashandisi veimwe distros futi.
Ikoko uye kwete zvisati zvaitika (zvisati zvadzivirika) kunozvarwa kusagadzikana, rusarura, chii mumusangano weLXA! tinodaidza seizvi:
Mushandisi acharega kushandisa iyo LXA foramu! kusimudzira mhirizhonga kana rusarura kune vanoshandisa imwe sisitimu inoshanda, kugovera kweGNU / Linux, kana chirongwa.
Muchinyorwa chine godo Ubuntu chakati: kune kuvenga kwandisina kukwanisa kuona ndichipesana nemamwe masisitimu, izvo zvinondisiya ndichishamisika. Zvino zvese zvandinogona kutaura ndizvozvo nhasi "izvo" hazvisi zvinongobatika.
Uye ndizvo zvatinoisa sechinangwa chedu patakatanga (linuxero uye «windosero» pakutanga), kushandura paradigm, kuti nhasi Linux ndeye munhu wese uye, panzvimbo pekugara muchidzidzo chenguva dzose, kuvandudza kuburikidza hurukuro iyo poindi yekutarisa yeLinux iyo yanhasi anachronistic.
Vashandisi veLinux vanofanirwa kuchinja.
Kudzidza kuti "kusaziva" hakuna kushata uye kunogona kutobatsira mukudzidzisa mashandisiro eGNU / Linux.
Iko kubatsira mumwe munhu hakusi kupa hove (ona iyo Ubuntu-CL forum mechanics kukumbira rubatsiro)
Iko kubatsira mumwe munhu hakusi kuti: Tora iyi link, ndinovimba inokushandira iwe, bye. Kwete nezvitsva.
Vashandisi havana kufanana, kunyangwe vachishandisa iyo imwechete distro.
Dzidza kuti distros haigadzise idiocy uye ivo havaikwezve futi.
Kukurudzira vashandisi vatsva kuti vasvike kuLinux inobatsira Linux.
Haasi munhu wese anoshandisa Linux nechinangwa chimwe chete.
Ndinokutendai zvikuru kune vese vaverengi kuve nemi, tinotenda chaizvo rutsigiro rwenyu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Vashandisi veLinux vanofanirwa kuchinja
Unoziva here zvandinofunga? kuti iyo nyowani inofanirana neyekare. Zvinoratidzika kwandiri, zvinowanzoitwa nenzira iyoyo.
Pindura ku _tty0
1- Kana iwe ukatanga kudzidza basa, iwe unofanirwa kunge uri padanho revaya vapedza, hapana chekutanga nezvakanyanya kukosha.
2- Kana iwe uchida kudzidza kutyaira, zvirinani nemutoro weScania, wopinda munzira, kwete kutenga mota diki uye kudzidzira munharaunda yako.
3- Kana uchitsvaga basa, unoenda wakananga chinzvimbo chashefu, hapana chekuva mushandi uye kukwira zvishoma nezvishoma.
4- Kana uchida kuva benzi, usatanga zvishoma nezvishoma, tinopfeka heti takananga uye isu ndidzo mbichana.
PS: Vashandisi veLXA, ini ndinobatana neFfuentes kukutendai nezvamakaita, pfungwa dzakavhurika, kutsoropodza, uye kubhengi senguva dzose.
rufus handigoni kubvumirana newe zvakanyanya =)
Ini handisi kana kufarira mashandiro anoita zvinhu zvese. Nei ndichifanira kufarira? Ngatione, nei ndichifanira kuziva zvese? Ini handikwanise kushandisa chimwe chinhu ndisina kufarira mashandiro ayo emukati? Ini handikwanise kupfeka wachi ndisina kufarira mashandiro ayo?
Handina kana zano rekuti mashandiro anoita mutariri, injini yemota yangu, nharembozha yangu, muchina unotengesa matikiti mumabhazi, zvisinei hazvo ndinoashandisa zuva rese uye handifarire kuziva mashandiro avo.
Pano nezivo kune yakawanda egocentricity, kuzvikudza, kukwirira, zvekuti kune kunosemesa.
esty saka unogona kuti iwe hausi geek, geek kana chero chaunoda kuitumidza, sezvo uri mushandisi akareruka.
Ndinozvigamuchira izvo, asi ... kana PC ikatyoka, tora uende nayo kuna nyanzvi iyo ichaigadzirisa, nekuti kana vakaisa maoko avo vanogona kuita nyonganiso.
_tty0 Zvimwe chete nemotokari yako, firiji, microwave, scooter, uye chero chimwe chinhu chinouya mupfungwa. Kana kuve geek uye geek (maviri akadai madhongi mazwi) kuita kunge avo vanozviti ndizvo, ini ndinofarira kuve munhuwo mushandisi.
Icho chinhu chekuzvidaidza iwe geek kana geek nekuda kwekuti iwe unoshandisa Linux, haisi iyo boludícimo uye vane makore gumi-gore vana?
Iwo assholes mazwi evana uye zvishandiso zvevakuru-vakuru.
esty: idimikira uye hapana chimwe chinhu, zvakanaka nemota yangu, firiji, microwave, scooter.
Ini handigadzirise mota yangu, saka handisi makanika, kana kuisa ruoko rwangu, handigadzirise firiji yangu, x saka handisi mugadziri wechando
Zvakafanana, mwanakomana wangu, uye harisi benzi ... =), ingori izwi.
Ndanga ndichishandisa Linux kubva '94, ndakaedza marudzi ese ekugovera, uye ndanga ndiine Debian kwemakore mazhinji.
Yangu yekupedzisira-ye-basa chirongwa chaive kugoverwa kweLinux kubva pakutanga, kwakaitwa bareback uye ndinoziva kuti chii kudya musoro wako nekuti raibhurari yakadaro haishandi kwauri kana nekuti wagadzira mireza isiriyo mune compiler.
Kutendeseka Ubuntu kwakanaka, kana iwe uchida koni (sezvazvakaita nyaya yangu) iwe une sisitimu yakafanana neyaDebian uye kana iwe usina zano rekubira iwe une nharaunda yakapusa kwazvo yakavakirwa paGnome.
Kutenda kuUbuntu ini ndakakwanisa kutora ese maJava programmers mukambani yangu kuti ndichinjire kuLinux, ndisati ndave weDebian geek neEclipse, ikozvino isu tese tinoshandisa Ubuntu nekuti iri nyore kwazvo kwavari uye pamusoro peiyo yakanyatsogadzikana. kupfuura Windows XP, saka musoro we "shit chirongwa changu chakakwenenzverwa, nerombo rakanaka ndarekodha shanduko mangwanani ano muCVS, ini ndakangorasikirwa nemaawa mana ebasa"
Pindura kune albandy
Chaizvo chidiki chidiki chekudaidza wega nekuda kwekushandisa linux. Iwe hausi chinhu chikuru, unongoshandisa linux.
Ndasuwa iwe uchiti Linux uye * BSD =)
Zvisinei, vanotibvunza ma linuxers kuti tichinje, ok, tichifunga kuti iwo rubatsiro rwakakura kusunungura software, kugadzira blog yekutaura nezvenyaya iyi, asi aya mablog haabatsire nei? nekuti ivo havabatsire kugadzirisa dambudziko, ndiregerere iro izwi asi ini ndinoritaura neakanakisa wave, iri reropa blog. Vana vakaisa linux 4 kana 5 mwedzi yapfuura, uye vane mabloggi vachitaura nezvezvinhu zvakadzokororwa pese pa internet.
Ini ndinofunga kuti usati wachinja, zvipire kuita chinhu chinogadzira yemahara software, sekunge ini ndinoita mune yangu inozvininipisa blog, zvinondirwarisa kuti ivo vanotaura nezve mahara software, rusununguko uye izvo zvinhu, kana ivo vachishandisa mapurogiramu kana distros ne1000 zvirongwa uye maraibhurari ane kodzero Ndeipi poindi? Hakusi kupokana here?
Funga nezvazvo zvisina basa uye ita sarudzo maererano.
Ini ndinoona ichi chinyorwa chichifadza uye ndinofunga kuti hapana munhu anozvarwa achiziva zvinhu uye kana isu tine ruzivo, hazvina kukwana kuti tigovane naizvozvo tiri kuwana zviga zvevanhu mumusika, vanhu vanoshoropodza ubunteros nekureruka kwavo nezvinhu zvakaita izvo asi kuti ivo vanofunga sei kuti Tinogona kuhwina musika kuenda kuMicro $ kazhinji, mushandisi weWindows aizoona chikamu chekuchinjisa chakanetsa, ndosaka chiri chakakosha rubatsiro kune iyo Open Sources yenyika ...
Icho chinetso chizere pane akawanda linuxers. Ini ndakatanga kushandisa Ubuntu nekuti panguva iyoyo ini ndaisave musayendisiti wemakomputa, uye Ubuntu ndicho chinhu chidiki pane chaigona kunditumira condor nePC (ndiko kutya uko munhu wese anako pakuisa Linux kekutanga). Uye kubvira pandakatanga ndakaona kuti mumaforamu mune hurukuro chete pamusoro peUbuntu. Haisi yakaipa distro, zvinoitika ndezvekuti zviri nyore, uye sezvo vazhinji vanonamatira vachifunga kuti inyanzvi dzekuziva maitirwo mashoma emirairo inosiririsa mune terminal, ipapo ivo vanoona Ubuntu nekuzvidza. Ini ndakachinja Ubuntu kwete nekuda kwenyaya yekuti zviri nyore uye ini ndinofungidzirwa kuve messian muLinux, kana zvisiri izvo kuti inofanira kukurumidza uye ndizvo zvandiri kutsvaga mune imwe distro.
Iye zvino ini ndiri musayendisiti wemakomputa uye linux chingwa chezuva nezuva, asi ndinoziva kuti shamwari dzangu dzisiri dzemakomputa dzinondiudza: chii chinonzi linux?, Uye ini handitore nguva yekuvatsanangurira, nei vasina hanya neLinux , ivo vanongoda kuve nematurusi avanobvunza ivo muzvidzidzo zvavo, uye haisi kunyanya tar.gz.
toxrn chaizvo. Iwe unofanirwa kushatisa uye udzikise hunhu hwako.
Izvi zvinoita kunge chekarere kare.
Ini ndinokurudzira kuti vaungane pamwechete mukwere uye vanonamira pamwe mubhokisi rejecha.
Ini ndaifanira kudzima spam. Dzivisa kuzviita.
Handina kuona posvo yakagadzirwa ne "LXA" kwenguva yakareba.
toxrn hahaha, ndine hurombo, zvakaratidzika kwandiri sekuti iyi link yaive yakachena spam uye ndakaidzima. Erdona toxrn asi ini handisi kuzopa imwe nzvimbo kune uya ane heti.
Zvakanaka, ngowani diki!
_tty0, hauna kugadzira GNU / Linux uye haisi sarudzo yako kuti ndiani anofanira uye haafanire kuishandisa, nguva.
Kana iwe usingade mablog evasikana, ini handizive zvawakaita pairi parizvino.
Zvinoenderana nekufunga kwako, kana iwe ukagadzirisa matambudziko muOS, iwe unofanirwa kuziva kushanda kwemukati kweiyo OS. Saka ini ndinoti, kana iwe ukanyora, iwe unofanirwa kuziva kunyora nekunyora nenzira kwayo, kana kuti ungadzidza, nekuti zvinoda mari yakawanda kuteedzera makomendi ako uine chikamu chekunyora nekunyora chakaderera pane chepuraimari.
Ndiwo maonero eese LXA
Dambudziko nderekuti vanhu vanobva kukoreji vakaenda kuyunivhesiti kunobvunza.
Zvakanaka, ini handina basa nazvo, ndinongoda kuziva kuti ingani 7 + 9 iri.
Uye chokwadi ndechekuti kune vanhu vanga vachinamatira neLinux kweanopfuura makore gumi, iko kushomeka kwedzidzo.
Zvakare, 80% yevanhu vanoshandisa ubuntu havana chinangwa chekuziva sainzi yemakomputa, saka havafanirwe kuishandisa.
Ndanga ndichikurudzira kwemakore kuti vanhu vashandise Linux, asi kubvira pakaonekwa Ubuntu ndakachinja pfungwa dzangu, chokwadi ndechekuti, kana iwe usiri kufunga kunzwisisa pc, usashandise Linux.
Matoyi evana uye maturusi evakwegura.
Pane dzinoverengeka nguva ini ndakaedzwa kuti ndifunge senge rufus, uye pane vamwe vashoma ndinayo. Haisi yangu yazvino parizvino, asi nguva nenguva zvinoita sekunge zvine musoro.
_tty0: ipapo kana ndichifunga kuti tine kukanganisa. Mune ino blog hatitaure nezve izvo zvaunoreva kutaura. Munguva yandave ndichichitevera, handina kuwana kamukira yakanangiswa pane imwe distro (zvirokwazvo handirangariri ndaona kamukira), kana posvo inotaura nezve mafirosofi epamusoro eesoftware yemahara kana zvisina maturo zvakafanana. . Muchokwadi, iri iyo Linux blog (huh? Ini ndichiri kubvunza izvo) iyo diki linux blog yandinoziva. Izvo chete zvekuona zvinyorwa zveN @ ty (seimwe yechiitiko icho Microsoft iri kuronga). Iwe unofanirwa kudzidza zvishoma usati wataura kana kunyora chimwe chinhu. Icho chirevo icho mushandisi wese weLinux anofanira kuziva (hongu zvakare ubunters).
Uye shandisa, hongu.
Uye ini ndiri kushandisa Windows ... handizive kuti ndakawana hwaro hwakawanda sei kuti ndisimbise pfungwa yangu ...
Tolkien aiti: «uye saka anotisiira _tty0, muropa we linux uyo aisakwanisa kuwanikwazve .. ..»
Wow! Kusvika vatanga kunzwisisa.
"Kudzidza kuti" kusaziva "hakuna kushata uye kunogona kutobatsira mukudzidzisa mashandisiro eGNU / Linux."
Ichi ndicho chikonzero nei Linux isingakwiri pamusoro pe1% yequota yekushandisa. Ndicho chikonzero nei OSX yatove pa8%.
Vashandisi havadi sarudzo, vanoda kuti zvinhu zvishande vasina kusarudza, zvinonzwika senge yeVashandisi veLinux, asi ndizvo izvo Microsoft neApple (uye chero software inoiremekedza) yakanangisa.
Haufanire kutonga bhuku nebutiro rayo, ndoda nemusoro waro.
Hei Chii chakaitika kumashoko _tty0 echinhu chechinhu uye zvese izvo? Iye zvino ndichaita senge ndisiri kupindura munhu kana ndiri kungotaura kunge munhu anopenga ... hummm hazvisi izvo kuti handizvide asi ...
Ah ndaona. Zvakanaka, chero zvakadaro zvinotaurwa nemuridzi webhola zvichaitwa;). Uye haisi ngowani, ngowani (zvakasiyana, ngowani inoburitsa mwenje wezuva uye ngowani haina, nekuti ine mapapiro = P).
Rudo nerunyararo, kwaziso.
Ndiani asinganzwisise kuti izvi zvakafanana neayo ice cream imba? Ivo vekare vachada prune ice cream uye nyowani vachada vanilla ice cream, asi pakupera kwezuva zvese ice cream. Idya ice cream yako, iva ne distro inonyatsokodzera iwe uye rega kusanganisa nevanhu nekuda kwechinhu chisina musoro chakadai paunomhanya pamushini wako. Kuzvikudza hakutungamire chero munhu kune chero chinhu chakanaka. Kana zvisiri, tarisa Windows Vista.
Pindura kuna Florsie
Ubuntu pachayo haina kupusa kupfuura Fedora, kana Mandriva, haina kana nyore kupfuura Debian.
Ivo vanokupa iwe unoshanda Debian uye iwe unogona kuita iwo mamwe mabhodhoro uye kupokana nawo seUbuntu, kwete zvekare, kana zvishoma. Ose ane hwaro hwakaenzana, iwo maviri ane akafanana mafaira ekumisikidza, ivo vane imwecheteyo package system uye vanogovana angangoita ese mapurogiramu uye graphical vabatsiri.
Iko hakuna chikonzero chekutaura kuti Ubuntu ndeye ma noobs, apo chaizvo akawanda maficha akawedzerwa kuUbuntu kazhinji anokonzeresa kusagadzikana uye ruzivo rwakawanda runodikanwa kuti uwanezve kubva mukukuvara. Ini ndaiti Debian yakanyatso kugadzikana uye nekudaro yakasununguka kushandisa kune mumwe munhu asingazive kubata zvakawanda.
Izvo zvinoitika ndezvekuti Ubuntu inonyanya kufarirwa, uye mumwe munhu asinganzwisise GNU / Linux distros, yekutanga distro yavanosangana nayo ndiyo inonyanya kufarirwa.
"Ini ndinokurudzira kuti vaungane pamwe mune chikwere uye vanonamira pamwe mubhokisi rejecha."
Ndinokudai N @ ty
Usataure ... ahhh, ini ndoda kusapokana, zvinowedzera tanquila ... iwe unoziva zvandinofunga ...
"Ini ndinopa zano kuti vaungane pamwe mune sikweya uye vanonamira pamwe mubhokisi rejecha."
Kwete, vanogona kuve vezvematongerwo enyika ... hahaha vanomiririra uzivi zvakanaka kwazvo uye imwe yacho
toxrn, ehe, ino foramu yakanaka, hahaha… oh ndinoti… blog xD
Laura, ndakazviisa kupi?
@toxrn anga ari nekuda kwe "Muridzi webhora" Ini ndinofunga xD
Zvichazova? = P
Ini ndinobvumirana zvachose newe hapana chikonzero chekurwa kana isu tese tichigovana zvakafanana faira system uye imwecheteyo kernel
Vangani vashandisi vasipo mumac kana windows kana linux vasina kana zano rekure rekuti chimiro chemukati che pc chinoshanda sei, zvirongwa zvavo .etc uye ndosaka tichizovakanganwa kana tiri kuenda vazvidze
Kana iwe uchida kuve unogonesa mune masvomhu, iwe unofanirwa kutanga waziva kuti yakawanda sei 1 + 1. Hautangi nekubvunza kuti ndechipi chakaomesesa equation kuenda kune yakapusa. Ini ndashandisa akawanda ma distros mukati mekudzidza kwangu kwese. , kubasa kwangu tinoshandisa debian, ubuntu, arch, fedora, suse, mac uye windows, kune vamwe vatinoshanda navo vanoshandisa madhiri uye havatozive kuti mupakeji maneja, basa rangu harisi rekuvaisa parutivi, ndeyekuvadzidzisa, kugadzira komputa chishandiso kwavari, kwete senge Chaizvo nyanzvi iyo inosvika yoisa chimwe chinhu chaisingatomboziva kuti chinoshandisirwei, chinhu chinongori ipapo nekuti iye anoziva akachiisa chimwe chinhu, chiri chekudzidzisa mashandisiro ekushandisa komputa nemazvo, kuvadzidzisa maitiro ekugadzirisa izvo zvakapwanyika uye nekuti zvakapwanyika, chinangwa chikuru cheaya maforamu maforamu aya kubatsira, kuzivisa, kugovana nekuparadzira. kana kwakapesana kuri zvaitwa, yakavharwa uye yakavanzika tsika yechinamato inoitwa, inova inopesana nefilosofi yedu.
@Ferk, Hauzive kuti nei Ubuntu iri nyore?
1.- Kuisa. Ubuntu ichave yakavakirwa paDebian, asi maitiro ekumisikidza ari nyore.
2.- Hazvina kukwana, asi kana iwe uine Hardware inoda yakavharwa sosi mutyairi, chiziviso uye mukana wekumisikidza nemabatiki mashoma anoonekwa mune yekuzivisa bhaa.
3.- Paunenge uchiisa neCD, kana ukasarudza mumwe mutauro kunze kweChirungu, chiziviso chinowanikwa mubha yekuzivisa kuti mamwe mapakeji emitauro anodikanwa kuiswa.
4.- Gnome-app-install inouya nekumira uye kuwana chirongwa kuri nyore kusiyanisa kubva kune mamwe ese maapplication.
5.- Canonical haipi zvakanyanya nezvetsika yemahara software uye inowedzera yakavharwa kodhi kune iyo kugovera iyo nekuda kwayo inobvumidza iri nani mushandisi ruzivo.
6.- Inosanganisira Firefox.
Ndakatanga neLinux panguva yandaisaziva chero chinhu pamusoro pechinhu chero chipi zvacho (dai zvisiri zvekuti ndaive nebhulogi kwegore zvisati zvaitika, ndaizove munhu anonyangadza ane chiperengo chakanaka), uye kekutanga nguva pandakaona pachangu paUbuntu hwangu hwakaiswa ndakapinda ndichivhunduka nekuti ndaisaziva mashandiro ezvinhu, ndakakumbira chipangamazano wangu kuti andibatsire nenzira yechisimba, rombo rakanaka akandinzwisisa, akandibatsira nematambudziko angu uye kuwana mhinduro dzinoverengeka, pamusoro pekundidzidzisa kutsvaga muGoogle nezvimwe zvinhu
kubva ipapo nechangu kuda kuziva ndakadzidza zvinhu zvakawanda uye chinhu chega chandinoda kuti ndibude mu «anenge wepakati mushandisi» kuronga chirongwa nenzira kwayo :) kusvika parizvino ndinodada nenguva yandakagadzirisa dambudziko neiyo virtualbox
Saka mushandisi mutsva, anenge asingazive kana kutsvaga mushe muGoogle, zvingave zvakafanira kuibvumidza imwe uye kuidzidzisa, kana ikawa zvakare, ichitsanangure zvakare, asi kuti kechitatu ikaburitswa mukushatirwa kwevose, uye ndechimwe chinhu icho chatinofanira kuzvipira kwachiri kwese: kubatsira avo vanokumbira, asiwo kuvadzidzisa kuti vawane yavo nzira
Nenhaurirano idzi, LXA yakabvisa chaizvo !!! Hahaha
Ini ndinofunga LXA inharaunda yakanaka. Avo vanoda kugovana pasina rusaruro, kana pamwe nekuseka, vanogamuchirwa. Ini ndinofunga zvinoita _tty0 yakaipa kwazvo kuverenga zvakanyanya.
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Bravo !!! Ini ndinobvumirana neshoko rega rega, semicolon.
Ndinoda kuti maLinuxeros asingashiviriri ayeuke kuti havana kuzvarwa vachiziva uye vaimbove vasingazivi sevaya vanotanga nhasi. Uye ramba uchifunga kuti hupenyu hunotora kutendeuka kwakawanda uye kuti avo vatsva avo vavanozvidza nhasi vanogona mangwana kuzova vatenzi vanovakunda.
Uye chimwezve chinhu: Microsoft uye zvine chekuita nesoftware vanoda idzi kurwa (uye ini handizoshamiswa kana vakazvikurudzira).
chinonyadzisa chaicho, handifarire ubuntu, uye maonero angu akachengetedzwa, asi apo nharaunda yerinux ichikura, chii chakashata nemushandisi anouya kuzoshandisa ubuntu?
Sezvaunoita shamwari iri kukumbira, uya nesu kuti tishandise GNU / Linux, iwe unoziva kuti unoida xD.
Hongu, vhiki ino yanga yakanaka, zvakashata mudzidzisi wangu haanzwisise izvo: P
Ini ndinobvumirana nevazhinji venyu, mese, zvakanaka handinyatso bvumirana na _tyy0, handifunge kuti ndinofanira kutaura kuti sei hehe.
_tyy0, ini handigovane mazano ako, iwe unoziva, zvakanaka kuti iwe uzive zvakanyanya (kunyangwe zvichindiita shuwa kuti mune yega yega post iwe yaunoita, iwe unosheedzera kumhepo zvese "zvinetswa" zvaunoita) uye pakupedzisira ndezvechokwadi kuti ivo vachakubatsira iwe, asi chaizvo kana uchiedza Nevanhu hazvisi nyore kuti iwe uve wakasindimara nemafungiro ako, kumaboss uye nevanhu vakakwirira kupfuura iwe haungakwanise kuvatuka nekuda kwekusatenda mune chimwe chinhu. kuti iwe unotenda, zvakanaka unogona, asi hachizove chinhu chakangwara kwazvo. Rombo rakanaka !!
LXA ndiyo yakanakisa !!! Kwaziso uye Kutenda Nekuchengetedza uye Kugadzira hurukuro dzakanaka kudaro…;)
"Ubuntu hwemunhu wese", ndakaverenga kuti munzvimbo zhinji (kana zvisiri dzakawanda) dzenzvimbo dzakakumikidzwa kune OS iyi, uye "isu tese" ndeavo vanoziva nezvesainzi yemakomputa, avo vanoita nekugadzirisa neconsole yekuraira, avo ndichingoti "Handishandisi win2 xp" uye ndichishandisa cube (kunyangwe ini ndichirishandisawo nedingindira mu win2 sezvo kubasa havandibvumidze kuchinja OS) kana avo vasina chavanoziva vari kuyedza neyekare " kushatisa iwe unodzidza ", nekuti" isu tese "tinofarira kuziva kuti ndezvei uye tinoda kuishandisa, izvozvi sezvo paine mafeni, pane atove mazhinji avo e" chinhu chidiki "kana" zvisina maturo "(yedu diki mibvunzo) chiropa chavo chakasvinwa, hazvo Sekuziva kwangu, haasi ese mayunivhesiti kana masangano kana makoreji anotidzidzisa kushandisa GNU / Linux distro, kana isu tine rombo rakanaka kuti vanotidzidzisa, (kune vamwe rakaomarara kupfuura vamwe kune izvo zvavanoita), ivo vanozvitenda iwe shasha uye kwete kugovana zvisingakoshi kubatsira nekuti haisi chikamu che «ideology»Ubuntu kana yemahara software, kwete TEEEEERRRRCOSSSSS,
LXA vakomana makorokoto, ini ndinogara ndichiverenga zvinyorwa zvenyu, kunyangwe ndikasa pindura nekuti ndinozviona ndiri chikamu chenharaunda ino, zvirambe zvakadaro.
L0rd5h @ d0w akadaro
Zvakanaka ini ndiri mhando yemushandisi anogara achiona mangwanani, masikati nezvimwewo nezvimwewo iyo LXA nunk yakataurwa na weba kana chimwe chinhu chakadai lol asi dzimwe nguva ndinofunga kuti vanhu vazhinji vakanganwa zvinoreva rusununguko kunyanya rwekusununguka kutaura sekutaurwa kwazvakaitwa mune izvi makomendi iwe haugone kuda kuziva equation usingazive yekuwedzera, yakafanana inofanira kutanga kubva kumashure uye haugone kuudza mumwe munhu kuti pakupedzisira nekutenda kuna Mwari akafunga kubva guin2s kuti haana kukodzera kudzidza kushandisa Linux uye kuti haabvunze mibvunzo, hahaha zvinoita kunge zvakapusa kwandiri kuti vanoda sei kusimudzira mahara software kana isu tisingatsigire vanhu, chinhu chekutanga chavachaita kudzoka kune iro benzi diki fafitera nekuti panogara paine munhu anovabatsira, izvo kupusa kuti vanofunga nenzira iyoyo, ruzivo Rwemahara uye rwunofanirwa kugovaniswa iro raive zano naRichar Stallmal uye wikipedia yaive yakavakirwa pairi, funga nezvazvo, uiongorore uye Mwari akuropafadze, Mhoroi kune vese vakomana ... uye vakadzi vakanaka guta lol
Pindura kuna L0rd5h @ d0w
Francisco Beronio akadaro
Nezve Ubuntu pane nyaya mbiri maererano nevashandisi. Kune avo vakauya kwariri kubva kune imwe distro, vakaneta, pamwe yekushandisa iyo koni uye nekubata iyo .conf mafaera kakawanda - sezvakaitika naDebian, uko Ubuntu kunobva ... - ndiko kuti, vanoda zviite zvakanaka uye nyore. Uye kune izvo zvinouya kubva kudivi reWindows. Zvakanaka, hazvisi zvekuita general, asi zvekupedzisira ndizvo zvakanyanya, nekuti ivo vanotenda kuti Ubuntu -kune nekuti ivo vashandisi veWindows- hupenzi-humbowo uye kwete ... zvakaita senge paingova neDOS chete - ndoda Basic ... - iwe unofanirwa kudzidza uye kudzidza unofanirwa kuve nemoyo murefu ... Tese tinoona mumaforamu gumi kuti kana mumwe munhu akasapindura chinhu nekukasira, uyo akabvunza anoshatirwa uye anoita sekuti anga ari mukutaura, kutyisidzira uye kutuka, kuzvidza zvishoma »mhinduro yemubvunzo wako ... zvakanaka, tisingataure kuti vanonyora sei mibvunzo yavo mumaforamu uye zvinyorwa ... ndinofunga kuti nepo Windows ichiita kuti zvinhu zvive nyore, zvaitawo kuti vamwe vatonyanya. Mahwindo akagadzira boka revanhu vasina kuverenga vasingazive nzira yekutaurirana neLinux, zvichipesana neizvozvo, haigone kurwa, yakatoiswa. Kune rimwe divi, kune godo revaya vanoshandisa mashoma anozivikanwa ma distros zvine chekuita neUbuntu. Chinhu chimwe chete ichocho chinoitika nemunyori, paanozove anozivikanwa vanhu vazhinji vanorega kumuverenga. Izvo ndezvekuti vamwe vanotenda kuti vanorarama - kana kukodzera kurarama - mune vechigarire vanhu ...
Pindura kuna Francisco Beronio
Iyo "hurukuro" iri pakati pe _tty0 uye esty inoratidza chimwe chinhu cheyero yekusakura kwezvose zviri zviviri, nekudaro tichidzivirira kubata nenyaya iri pasi ... zvinova zvinogara zvichiitika nepro uye anti linux ...
Dambudziko rangu ne titiyoOo inoenda neimwe nzira, iyo sekutaura kwaFfuentes, rimwe zuva vachaziva.
Corrupt Byte: unogona here kujekesa zvishoma pane yako poindi 5? Unogona here kududza muenzaniso?
Ini handifunge kuti vanhu vanga varipo vakakomberedza gnu / linux kwemakore vachapokana ne ubuntu. Ini ndinofungidzira kuti kana vachinetswa nehumwe hunyanzvi hweavo vanofunga kuti gnu / linux ndeye ubuntu uye hapana chimwe chinhu. Wese munhu anoziva nezvezviuru zvekugovera kunze uko. Uye izvo kunyangwe zvisingaite kunge pane misiyano mizhinji. Asi chekupedzisira asi chisiri chidiki, ichokwadi kuti neizvi unosvika kwaunoda. Kana ivo vasingafarire chero chinhu kunze kwekushandisa chete Ubuntu, ivo vanofira ipapo, vasina kudzidza kuti kune zvakawanda zvekuona. Iniwo handizive kana uri mukana wekuti kune vazhinji vashandisi en masse nekutenda kubuntu. Handizive kana zvakanaka zvakadaro. Izvo zvinofanirwa kuonekwa mukufamba kwenguva.
Che esty, usave usinganzwisisike, chinhu chega chiripo chekutaura zvakaitika chii chiri pano uye pane yangu blog, =)
Icho chokwadi chekuti mahara zvinoreva kuti ini ndinogona kugadzira ubuntu distro nefotoshop uye 3dmax inosanganisirwa, uye ndisiri kutyora chero mitemo, kunze kweiyo yephotohop uye 3dmax?
toxrn, masosi, akazvitaura nekuda kwezvaakaisa toxrn mune yapfuura posvo, akati izvi zvaitaridzika kunge foramu ine akawanda mhinduro ... uye zvakanaka, ini ndinozvitaurawo: P
Zvakanaka ini ndinodawo kuziva kuti toxon yaireva nekomendi # 5 ...
Uh ... zvirokwazvo.
Paunenge uchiisa Ubuntu iwe unowanawo yakakura sarudzo yemamodule ine isina-yemahodhi kodhi kazhinji kumakadhi eWiFi senge Atheros kana Broadcom. Iwe unogona kutsvaga iyo runyorwa rwefaira akaiswa, tsvaga iyo linux-inorambidzwa-yekuwedzera-yakajairika package. Ini ndinofunga Canonical inoita basa rakanaka kusarudza mashandiro pane "rusununguko", vashandisi vane zvishoma zvekushushikana nazvo.
Kugovera senge gNewSense mahara zvachose, nekuti hazvisi chete izvo zvinosanganisira kodhi yakavharwa mune yekumisikidza, asi zvakare mune yayo repackaure haugone kuwana chero package ine rezenisi-yemahara rezenisi, inodzivirira muyedzo wekushandisa yakavharwa kodhi kugadzira yako basa remakomputa :)
Zvakanaka kutaura kuti haudi Ubuntu nekuti inokundikana mune izvi, imwe, uye nekuti ine izvi zviri nani mune imwe, uye kuti inogona kuve neiyi. Asi kutaura kuti haudi ubuntu nekuti iri nyore uye nekuti inounza vanhu vakapusa kudivi rakanaka reuto, hongu, ipapo kana iwe uri munhu ane godo.
Ndine urombo Cesar, ndakagadzirisa mhinduro yako. Iwe uchaziva nei.
Hapana dambudziko Cesar. Kwaziso huru.
oooooo kumwe kutaura kwebumbtero.
iwo hutero anogara achipa maodha panzvimbo pekuyedza kugadzirisa yavo distro inoshanda zvakanyanya.
asi zvakanaka chii chauri kuzoita, isu tese tinofanirwa kuda ubuntu, zvikasadaro isu tine godo troll.
hahaha, ndine hurombo nekutumira kunze kwechimiro, hahaha asi izvi zvaitaridzika kwandiri ... hahaha
Zvimwe zvinhu nezve Facundo de la Cruz, iyo yekubira…. kufanana nemhanza yemhanza.
Unogona kumira neiyo tty nzombe? Zvakwana kare.
Ichokwadi ... ndine hurombo. Zvapera.
Asi ngazvive pachena kuti ini ndinongoteedzera chinyorwa kubva kune iro blog.
Ini handingashandise Ubuntu nekuti haina kundishandira zvakanaka, kuti ini ndiiise uye iro password password harishande kwandiri parinofanira kundishandira iro rakandinetsa zvakakwana, asi rinondirega ndiise zvimwe zvinhu pasina kuisa password password, ngatiende sekunge ndaive mumidzi yemidzi, ini ndakamboisa mandriva, fedora, uye zvimwe uye zvaigara zvichindifambira, ini ndaingova nematambudziko makuru nekuparadzirwa uku, hongu kana ini unoda kuiisa isina zvimwe uye kuti zvese zvakaiswa kunyangwe dzimwe nguva pasina password password inogona kunyatso gadzikana kune vamwe, asi kwandiri ini ndinoona izvo sekusagadzikana zvakanyanya.
@esty: Zvakanaka. Yakanga iri bullshit pane yangu chikamu kuisa iyo link. Kumbira ruregerero zvakare.
Ini ndinogovana zano rekuti juan uye esty ... kana iwe usingade distro nekuti zvinokundikana iwe kana izvo kana izvo kana izvo kana imwe hazvishande, zvakanaka une chikonzero, asi kana usinga sezvazviri nekuti zviri nyore kushandisa izvo zvakapusa uye zvakapusa nekuda kwechikonzero icho kuti nhamba yevashandisi haina kuwedzerwa nevanhu vakapusa uye vanegodo vanotenda kuti kuve chinhu chiri nyore kwakaipa ... Salu2
Ko kana ndisingazvifarire nekuti chakakurumbira? Ini handisi kupa chero nyaya, unongova mubvunzo kuti uone zvavanofunga.
Zvakanaka, handina kuverenga zvese zvakataurwa (70%, zvimwe kana zvishoma) uye ndinoona kuti tiri mubhizimusi senguva dzose.
Ngatione, ini pachangu dzimwe nguva handizive kana ini ndichifunga senge tty0 kana kwete, nekuda kwekuti basa rangu nderekugadzirisa zvinhu (Ehe, dzimwe nguva chero rudzi rwechinhu chinogona kuwanikwa muresitorendi hombe) uye nekudaro, iyo Computer Computer musayendisiti anofanira kumuziva zvishoma.
Asi havazi vese vakatanga seni, neAmstrad, uye MS-DOS 7.10 (Ngatione kuti vangani kusvetuka neiyo isipo xD) saka pakupedzisira, ndakaenda kudivi revaya vanofunga kuti mhuka yega yega inoita ne PC yayo inobuda mumabhora, asi izvo ini handigadzirise zvinhu zvemahara.
Uye izvi zvinouya nezvei? Kune izvo ini ini ndiri mushandisi webuntu. Ubuntu ... nebhokisi rakavhurwa uye rakagadziridzwa kudzamara rataura zvakakwana. Nekuti icho ndicho chishamiso cheUbuntu, kuti chinoziva iyo Hardware ndisina kushandisa maawa mashanu ndichifunga kuti sei ndisingakwanise kubatanidza neinternet zvirinani kubvunza, nei ichiunza software yekurova, nei ichigona kuve gnome, kana iyo inonditendera kuti ndiiputse uye kumisikidza desktop yangu nenzira yandinoda.
Debian anozvibvumidza futi, asi chokwadi ndechekuti, akawanda mabhugi ane, anononoka kudaro, ini ndatoita 2 shanduro kukwidziridzwa uye zviripo ... tisingatauri shanduko yemaneja wewindows, blah blah blah
Uye haana kundipusa. Wow, ndezvekuti ini ndakashamisa kana kuti pane fan yakawanda yepepuru inotenderera pano?
Ngatione, vanababa, kana muvakidzani achishandisa ubuntu kukasube, pachinzvimbo chekumupa dhongi, muudze kuti iwe unoshandisawo linux. Saka kana chimwe chinhu chikamiswa, chichauya kwauri. Uye ipapo iwe unogona kumubhadharira iye kuti atsigire kana kutyora mazai ake kuitira kuti awane madiki Asi zvirinani haazofunge kuti uri elite geeks.
Kana Ubuntu ikazozivikanwa, zvirinani, vashandisi vazhinji (Ehe, kunyangwe avo vanofunga kuti vakapusa) vanoziva kuti Ubuntu idhisiki yakagadziridzwa. Uye pakupedzisira magumo ekuda kuziva.
Uye kune ubunteros ... zvakanaka, ini handizive ... edza iyo openbox iyo inopa loooooooong maawa ekuvaraidzwa nekumisa menyu inoita zvese uu
Ini ndinodonhedzera uye ndosheedzera iyo yese posvo. LXA! Ndinokuda.
Kuedza kuongorora: Zvinogoneka kuti vanhu vasingashiviriri vakapatsanurwa pakati pevanyowani svumbunuro nevaya vakagadzira stockholm syndrome (yekunetseka kubata software; uye ivo vanofunga kuti yemahara yakaoma, saka ¬zvinonetsa zvachose -> vakasununguka zvachose).
Chero zvazvingaitika, ndinoshamisika kana tichigona kuita kuti vanhu ava vachinje kana isu tichifanira kunyatsowana imwe hobby yavo kuitira kuti varambe vachidavira kuti ndivo vakangwara uye vorega kukuvadza linux uye mahara software.
"Mahara hongu uye chete kana zvakaoma." iyo anti tag firita yaibvisa.
"Mahara kana uye chete kana zvakaoma." kutarisa kuperetera. katatu kutumira. Ndinokodzera kufa
haahaha, imwe_sam, hazvina basa, zvakanzwisiswa.
hama yangu inoshandisa ubuntu, kubva ipapo, ndakafunga kuisa debian: P
ikozvino handidi hama yangu: D
Nah, ndiri kuseka, ini handidi Ubuntu, nechikonzero chega chekuti hama yangu payakaigadziridza, yakatanga kukundikana (ini handina kukwidziridzira kudhiri nekuti ndinotya: s)
Mukuronga, painodzima pakati nepakati inotaridzika kunge yakashata, uye dps yemaawa gumi nerimwe mumutsara (ibhuku remabhuku: D) zvakakundikana, muchirongwa chekuti kubaya kaviri hakuna kushanda uye maforodha akasarudzwa zvisirizvo ... nezvimwewo: D.
Ini ndinoda kumeso: D
asi ini ndinoda ubunteros, nekuti mune yakachena chidzidzo iwe unogona kuwana mhinduro dzese dzaunoda ...: D
zvakare munharaunda dzedebian vakandibata zvisina kunaka nekukanganisa mu "dual core processor" kana kutaura kuti mamwe mapurogiramu haana kushanda muna debian64, vakanditi "ah asi ini handina zvido zvakafanana newe" asi nekuseka. toni ¬¬
saka nharaunda dzehunhu dzine hushamwari: D uye mumwe anogona kubatsira, kunyangwe ndaive nedambudziko, ndakabvunza munharaunda yehuntera uye dps yekumisikidza ndakawana mhinduro: D ndicho chinhu chakaipa xD
Zvakanaka, izvozvi ini ndiri kunyora kubva kune debian yakaiswa kubva kune base system ine openbox.
Kwaive kushungurudzwa kwakanyanya uye ini handisati ndaitwa.
Iyi fucking system inofanirwa kuve yakaoma kudaro here?
Mushure memaawa mana ekugadzwa andinayo ... izvo zvinondiita kuti ndive nani kupfuura mamwe ese anofa linuxeros?
Handina chokwadi nazvo. Ini ndinoda Ubuntu nekuti inongoshanda. Iwe une webhu kurova kuitira kana usinga. Uye kana zvisiri, sekutaura kwevincegeratorix ... nharaunda haisi yekunyepedzera inosemesa. Asi pane izvo zvinopesana.
Icho chiri nani pane debian mune zvimwe zvinhu senge semuenzaniso inongoziva iyo Hardware. Zvinoita sekunge iwe unotenga mota ivo vokupa iwe neinjini muzvidimbu zviviri nekuti "wakadzidza zvemakanika pakuyedza kuyedza."
Izvo hazvibviswe nemunhu.
Ini handisati ndasvika kune iyo "Sei iyo gehena ini kumisa yangu yeropa Wi-Fi?" Chikamu izvozvi. Ikoko pamwe ini ndinotumira iyo debian system kugehena uye enda kudivi rerima ne esty xD
Ndo izvo izvo ubuntu zvakadzivirira, kuti vanhu vanoda kuedza linux, vanosiya vachitya.
Kana iwe usingazive manzwisisiro acho ...
Ini ndinongofunga kuti munhu wega wega ane yavo yakanaka distro: D
Semuenzaniso, hama yangu haina kupihwa debian, nekuti mushure mezvose ndiye mumwe weavo "vanoda kuve mambo wenyika, asi ane husimbe" saka akadzora mavhidhi mashanu edhibian, uyezve aida kuenderera hunhu: D
Semuenzaniso, ndinoshungurudzika pa chess, ping pong nezvimwe ... pandinorasikirwa, asi kwete paPC, zvinodaro nekuti hapana munhu anondirwisa, asi ndinofarira kuverenga, uye ndisati ndaverenga zvisina maturo zvisina tsarukano kubva kumablog asina basa, ikozvino ndinozvivaraidza nekuverenga nekudzidza, pane linux ...: D
uye avo vanofarira kuve vakangwara vakasarudzika kubva munharaunda, vasinganzwisiswe, ndivo vadikani vavo slackware: D
Neichi chikonzero, avo vanofarira KUZIVA kuti pc irikuita sei, zvingava nyore kwavari, asi avo vanongozvitora uye vasingazive kupfuura izwi msn IE (ndakasangana nevanhu vakadaro, mune «Zvakajairika» sice «ita izwi» Kana kana vasingakwanise kuisa msn havagone kutaura, uye vanondidaidza (haha hama dzangu dzakandidaidza nekuti msn yaisavashandira, havana kana tsvaga imwe nzira)) zviri nyore kune ubuntu, knopix, freespire, linux mint, nezvimwe zvinhu zvacho
dambudziko nderekuti vanhu vazhinji sezvo ivo vachishandisa ubuntu, uye zvinoreva kuti vanhu ava vangori vashoma vashandisi (ndokuti "wepakati": D)
uye izvo zvinokonzeresa kuti pachinzvimbo chekuva ne 1 kusvika ku3 nyaya yedambudziko mu ubuntu pane anopfuura gumi paforamu izvo zvinoita kuti pandinotsvaga madhibhodhi emanyorerwo ndinofanira kutsvaga "ubuntu", kunyangwe iwo aine divi rakanaka kuti saka iyo pindura iri kuramba ichiwedzera "kupusa" sezvo ichifanira kuchinjika kune vashandisi vatsva (ini handisi kuti ivo vakapusa: D) izvo zvakanaka kune mumwe munhu anoda kutanga
Ini handina kutaura kune tsvuku ngowani uye zvigadzirwa, nekuti ... ini handizive ... handingashandise, nekuda kwekuti sezvo paine zvakawanda zvebuntu info zviri nyore kuwana mirairo, zvakare, ini handingashandise ivo nekuti ndine usimbe, uye ndinoda Debian, asi fananidzo iyoyo
ps: Ndiri kureva kuti kana iwe ukapinda, ivo vaifanira kunge vari "kutonhorera" kana nekuti iwe uchida kuve mukuru, kana nekuda kwekuzvikudza, nekuti kudada kwako pachako kunokuuraya.
Kana zvisiri, unenge watove kushandisa slackware, gentoo, arch.
kana usiri mumwe weavo vanofarira, kana iwe usingazive kuti firefox iripo, kana iwe usingazive chinonzi linux, kana iwe usingazive kuti mac os X chii kana iwe uchichiziva nekuti vakakuudza, asi hauna kumboongorora , asi kuita uye runako zvakagadziridzwa)
kana iwe uri an antonym, shandisa debian, (kune zvimwe asi ini handikwanise kufunga nezvazvo, unoziva ndakashatiswa ne .deb)
uye kana iwe usingazivikanwe, asi zvakare anemhando yepamusoro (senge yakashata kusvika runako runoshamisa) shandisa slackware, gentoo kana Arch
Zvakanaka, ndanga ndichishandisa linux kwemakore mana uye ini ndinoshandisa ubuntu kune yakapusa chokwadi chekuti ini ndinoda kufamba mumatumbu eiyo system ... asi kwete kuita yekumisikidza.
Ikoko ini ndine esty, hazvifungidzike kuti muna2009 ndichiri kuenda kunonyora (iyo inofadza wifi yakandisiya ndave guruva, ndiri kutora simba kubva mhenyu cd xD) kunze kwekukosha. Hupenzi.
Izvi zvinoreva kuti, maDebianite anoisa mabhatiri, uye orega kutarisa guvhu reanowanikwa, kana kuti hapana munhu achaenda kuDebian nekuti ndeimwe nzira (Kunze kwekuturika seni uye nevanhu vanoziva, ikoko ini handina Ini ndinosanganisira xD).
Kana ndichida kuunganidza chimwe chinhu, ndinozviitira kunakidzwa.
Kwete nekuda kwekudikanwa.
Ini ndinofunga dambudziko nderekuti masayendisiti emakomputa, kana iyo iri nyaya yangu, dzimwe nguva tinoshatirwa nevanhu vachifanirwa kutaura zvinhu zvakafanana nguva zhinji, uye dzimwe nguva kumunhu mumwe chete, uye kazhinji mahara. Zvino zvinoitika kwatiri isu nevashandisi veLinux zvishoma kwazvo mukombuta sainzi, pasati pave nevazhinji kudaro. Asi zvakanaka kuti Linux inopararira uye icho chikamu cheichi chiitiko. Pese pavanoshandura maWindows (kana ndikashandawo neWindows uye ndikasawana mikoko;) chinhu chimwe chete chinoitika kwandiri. Isu tinofanirwa kuve nemoyo murefu, ndizvo zvatinopa, hazvifanirwe kunzwa zvakaipa nezvedu. Hapana munhu anozvarwa achidzidza.
Chimwe chinhu: Debian neUbuntu zvakanyanyisa kufanana kupfuura zvakataurwa nevamwe. Ivo vanogovana zvinhu asi vane nzira dzakasiyana uye zvinoratidza. semuenzaniso kushomeka kwemidzi midzi muUbuntu, kugadzikana kweDebian kugadzikana, Ubuntu Hardware rutsigiro, nezvimwe. Ivo vakasiyana, ini ndinoshandisa zvese uye mumwe neumwe zvake.
Zvakanaka, ini ndakanda zvese zvataurwa uye muchokwadi iyi blog inofanirwa kunge iri foramu, ini ndinoshandisa ubuntu nekuti chokwadi mushure mekurwa kwemaawa akati wandei nemamwe linux distros, unopedzisira waisa software yekudyara pavari kuti vashande zvakanaka, saka isu tinorwa zvakadii Kana pakupedzisira toshandisa izvo izvo Ubuntu zvinounza kuita kuti hupenyu hwako huve nyore uye Linux haina kuoma sekufunga kwaungaita vamwe, handizive kuti nei paine vanhu vanoda kuchengetedza nhema yekuti Linux iri yakaoma, yakanyatsogadziriswa system uye yakagadzikana ne linux, zviri nyore senge mac kana windows mune zvekutanga zvinoshandiswa, kushandisa hofisi suite, web browser, mutumwa, muoni wemufananidzo uye mp3 player, zvinova izvo anowanzo mushandisi uye azvino anoshandisa komputa,
mazhinji emasters ayo nhasi akabatanidzwa (show off) nemamwe linux distros, akatanga nekushandisa ubuntu ... saka ... ndinogovana iyi posvo ...
Ini ndakatanga paLinux nekuda kweUbuntu, uye ini ndakaona kuti chimwe chinhu chinonzi Ubuntu chaivepo nekuda kweSoftonic. Asi Ubuntu 8.04 haina kuwirirana nelaptop yangu, saka ndakaibvisa, uye mushure mekuyedza akasiyana distros ndakasarudza Guadalinex 4.2, iyo yakavakirwa paUbuntu, uye Puppy Linux.
Rimwe zuva ndinogona kukurudzirwa kuyedza imwe trunk distros, asi ndipo pandichave nekunzwa kuve neruzivo rwakakwana kutora iyo ndege.
Parizvino, ini ndinoshandura masisitimu anoshanda andakaisa pane hard drive yekomputa yangu (Windows xp, Guadalinex 4.2 uye Puppy Linux) neLiveCD zvikamu kubva kune mamwe ma distros. Nhasi, semuenzaniso, ndakadzorerazve mifananidzo yakawanda ndichishandisa Gimp paUbuntu 9.04, uye ndainzwa kugadzikana kusafanira kunyora chero chinhu kuti ndishandise iyo nyowani vhezheni yechirongwa chekutora mifananidzo.
Ini ndinoda Linux, asi ndine zvakawanda zvandinosungirwa kuti ndipinde kwazviri, saka dai pasina ma distros ari nyore kushandisa seUbuntu, zvingangodaro ndingave ndisiri chikamu cheiyo 1% iyo inoshandisa iyo penguin system.
Kana Linux yakambotarisirwa kuve imwe nzira chaiyo kune anoshanda masisitimu akadai seWindows kana Mac, mumaonero angu nzira kwayo irikugadzirirwa ne distros seUbuntu, iyo inobvumidza vashandisi vemakomputa kuyedza neiyi sisitimu yekushandisa inoitwa nevazhinji. press, uye zvisina tsarukano.
Nezvikonzero zvambotaurwa, vashandisi ve trunk distros havafanirwe kufungira distro senge Ubuntu, nekuti kuwedzera kwehuwandu hwevashandisi veLinux kunozopedzisira kwabatsira nharaunda yese.Kana kuti hauna kuneta nezve chii kana iwe uchida kuisa new hardware isu tinongowanikwa chete madhiraivha eWindows uye Mac? Dai nharaunda yedu yakamiririra inopfuura 1% yevashandisi vemakomputa, zvirokwazvo makambani anogadzira Hardware anotitorera isu zvakanyanya.
Uye chero zvazviri, panogara paine chikamu chevashandisi veUbuntu vanozopedzisira vatendeudza maziso avo kunharaunda dzezvakaitika, saDebian, uye ndiani anoziva kana vamwe vavo vachizopedzisira vazvitutumadza.
ZUVA REMAWINDI - Technologies yekuputsa madziro